China na-ekpo ọkụ gbawara okpomọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | LYBH
Waste Taya Pyrolysis Osisi
Ogbe Type Waste Taya Pyrolysis Osisi
Na-aga n'ihu ahihia Taya Pyrolysis Osisi
Waste Plastic Pyrolysis Osisi
N'efu ụlọ pyrolysis osisi
Oilsludge Pyrolysis Osisi
Carbon Black egweri akụrụngwa
Imefusị Taya Ngwa Ngwa
Imefusị Plastic ndinuak Equipment
Hot gbawara okpomọkụ
Ogbe Type Waste Taya Pyrol ...
ọkụ gbawara okpomọkụ
Igwe ọkụ a na-ekpo ọkụ bụ ụdị ihe ọkụkụ na arụmọrụ dị elu na ike nchekwa.Ọnụ ọkụ ọkụ na-adị ngwa ngwa, ọ na-ewe naanị minit 20 site na kpo oku na arụmọrụ nkịtị.High ogo nke akpaaka, ikuku ikuku nwere ike idozigharị aka ọ bụla n'ime ogo akara .Ndị ikuku na-ekpo ọkụ na-akwụsi ike ma na-achịkwa njikwa ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịdị n'ime ± 5 '.Safe ma bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi, ngwaọrụ nchekwa zuru oke.
A na-ahazi ahụ na ikuku ọkụ ọkụ na njikwa nke akụrụngwa akụrụngwa niile ma mebe onwe anyị, nke nwere ike ijikwa nhazi n'etiti ihe dị iche iche ma belata ọdịda nke nhazi nke akụkụ ọ bụla kpatara. Ọbụna ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, enwere ike idozi ya na ọsọ ọsọ.
Igwe ọkụ a na-ekpo ọkụ na-anakwere ụdị ihe na-agwakọta, nke nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke okpomọkụ, nwere ike inweta okpomọkụ dị elu, mepụta ikuku ọkụ ọkụ ngwa ngwa, dị mfe ilekọta, nwere ike melite arụmọrụ mmepụta ma chekwaa ego.
3.combustion ụlọ ahụ dị maka ihe mechiri emechi, ụdị okpomọkụ nke 1100 ℃, na-eji usoro aluminium silicate na-ekpuchi mkpuchi ọfụma, nwere ike ịkwado nkwụsi ike nke gas na ọkụ ọkụ, nwere ike belata ọkụ ọkụ na nchedo combustor nwere ike izute mkpa nke ọkụ ọkụ, mkpuchi ọkụ, ichebe ọkụ, ọnọdụ dị elu nke ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na gburugburu 60 ℃, na anaghị achọ oven ma jigide ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ụlọ ọkụ ọkụ na-amalite nkwụsị oge niile nke stovu ma ọ bụ ọkụ agagh aputa ihe nkowapu nke ihe megharia, nye aka oru nke ihe ndi ozo n’okpuru onodu di iche.
4. Ezi uche nhazi nke ohere ọdụ ụgbọ mmiri na chọpụtara onu na oku ahu, mgbanwe oghere na uko mmechi Ọdịdị imewe, belata onu nke oku gas ejupụta na oyi ikuku inhalation.
A na-emepụta ọnụ aka nke akaebe na-ere ọkụ iji zere mmebi nke ahụ ọkụ ma ọ bụrụ na ihe ọghọm ma gbasaa ọrụ ọrụ nke akụrụngwa ahụ.
Ngwá ọrụ uru:
1. N'oge a, ọtụtụ usoro ọkụ na-achọ ka ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ajụkwa oyi ugboro ugboro, na mgbanwe mgbanwe oge niile ga-eme ka mmiri evaporation na firebrick, nsị nke mgbidi firebrick, mmezi, mgbape ma ọ bụ ọbụna mgbaji nke lining, na-akpata arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọkụ na obere ọrụ ọkụ.
2. Ọkpụkpụ mgbidi mgbidi firebrick na-eme ka o sie ike ịrụzi ọkụ ahụ. Firebrick demolition na relay, ogologo ewu okirikiri, elu mmezi na-eri.
3. Ceramic fiber modul dị ka ụdị ọhụrụ nke nchedo gburugburu ebe obibi mkpuchi ihe mkpuchi, seramiiki fiber modul dị nnọọ ike na nguzogide ọkụ, enwere ike iji ya mee ihe na -40 ℃ ~ 1430 ℃, nguzogide ọkụ, akwa mkpuchi mkpuchi anaghị agbawa, adapụla, egbula ọkụ, na acid, alkali, mmanụ na nrụgide kemịkalụ ndị ọzọ magburu onwe ya.
4. Njirimara nke seramiiki eriri modul na-tumadi na-egosipụta akụkụ:
1) Low thermal ikike, ala thermal conductivity.
2) Ezigbo nkwụsi ike ọkụ, ike ikuku na nkwụsi ike kemịkal.
3) Ezi nguzosi ike nke oma na nguzogide ihe ojoo.
4) Mbelata mkpọtụ na mmịpụta ụda, ọkpụrụkpụ edo, nwere ike iji ya mee ihe maka ikpo ọkụ na ikpo ọkụ, dị mfe ịwụnye ma jiri.
5. N'oge gara aga, a na-ejikarị modulu eriri ochie ochie eme ihe na ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ, n'ihi na ikuku ikuku nke eriri modulu bụ naanị 15-18m / s, na ọnụọgụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ nwere ike iru 30-35m / s. Ya mere, ochie eriri modul na-adịghị eji na flue gas ọkụ gbawara ọkụ.
1.Quality akwụkwọ ikike oge: Otu afọ akwụkwọ ikike maka isi chernobyl nke pyrolysis igwe na ndụ mmezi maka zuru ezu set nke igwe.
Olọ ọrụ anyị na-eziga ndị injinia maka ntinye na ịnye ọrụ na saịtị onye zụrụ ahịa gụnyere ọzụzụ nke nkà nke ndị ọrụ zụrụ ọrụ na ịrụ ọrụ, mmezi, wdg.
3. Inye okirikiri nhọrọ ukwuu dị ka asịwo si omumuihe na ala, obodo ọrụ ọmụma, ọrụ ntuziaka, wdg ka asịwo.
4. Maka mmebi nke ndị ọrụ kpatara, ụlọ ọrụ anyị na-enye akụkụ na ngwa ya ọnụahịa ego.
5. Anyị factory ọnọde yi akụkụ na-eri price ahịa.
Nke gara aga: oku
Osote: Imefusị Plastic ndinuak Equipment
Mmanụ ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ
Mmanụ ụgbọala stovu maka Heating
Kwụ Ọkụ Blast Stove
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ
Okpomoku di oku
Ngwaahịa zuru ezu: Usoro ọgwụgwọ (nke ndị ahịa nyere ya) Mgbe plastik ndị a na-ekpofu na-akpọnwụ, akpọnwụwo, gwepịa ya na usoro ndị ọzọ, ha nwere ike nweta oke kwesịrị ekwesị Usoro nri A na-ebuba plastik ndị a na-emeghị emegharị na ntanye mgbanwe. Na-aga n'ihu usoro pyrolysis The n'efu plastik na-nọgidere nri n'ime pyrolysis chernobyl site feeder maka pyrolysis. Heating system The kpo oku ngwaọrụ mmanụ tumadi na-eji ndị na-abụghị condensable combustible gas emepụta site pyrolysis nke wast ...
Ngwaahịa zuru ezu: A na-eme ka ọkụ ọkụ ọkụ na-aga n'ihu, nke a makwaara dị ka ọkụ ọkụ U, maka mmanụ sludge mmanụ ájá na nsị ọgwụgwọ ahịhịa nsị, a na-ekewa ọkụ ọkụ ahụ ụzọ abụọ: ọkụ akọrọ, ọkụ carbonization. The ihe mbụ abatakwa ihicha oku, mbido ihicha, mmiri ọdịnaya evaporation, na mgbe ahụ na-abanye na carbonization oku cracking, mmanụ ọdịnaya ọdịda, na mgbe ahụ na fọduru ọkọlọtọ orùrù, iji nweta na-aga n'ihu ...
1. Mepee ụzọ ahụ: adaba na ngwa ngwa na-ebu ọkụ, ngwa ngwa jụrụ oyi, adaba na waya ngwa ngwa. 2. N'ịbụ onye jụrụ oyi nke condenser, ọnụego mmepụta mmanụ dị elu, mma mmanụ dị mma, ndụ ogologo ndụ na nhicha dị mfe. 3. Original mmiri mode desulfurization na ájá mwepụ: Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè wepu acid gas na ájá, na izute mkpa mba ụkpụrụ. 4. Mwepụ na-ekpochapu dị n'etiti ọnụ ụzọ ọkụ: ikuku, ikuku na-akpaghị aka, dị ọcha ma na-enweghị ntụ, oge nchekwa. 5. nchekwa: automati ...
A ga-agbajikwa iberibe taya mgbe eriri na-ebu eriri, eriri eriri, ihe nkedo, wdg na nrụgide na-adịghị mma na usoro pyrolysis na-aga n'ihu site na pyrolysis, na usoro mgbe gas na-emeghachi omume okpomọkụ 450-550 ℃ n'okpuru ọnọdụ nke ngwa ngwa ngwa ngwa pyrolysis mmeghachi omume, mepụta mmanụ pyrolysis, carbon carbon, waya pyrolysis na gas combustible, gas combustible site na nkewa nke mmanụ na gas mgbake unit mgbe banye n'ime ọkụ gbawara stovu ọkụ, maka dum mmepụta ...
Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Imefusị Taya Recycling Machine, Ogbe Pyrolysis Osisi, Imefusị rọba, Taya Pyrolysis,